Kusvira kwandakaita Tete Vangu Mumota paParty - PART 1 - Masasi eHarare
DzeBonde Kusvira kwandakaita Tete Vangu Mumota paParty – PART 1
I am a tall and light skinned guy ndine 25 years , ndainge ndisingade kusvira aunt vangu but I had not choice.
Vanessa was in her late 30s aiva nebasa riribho, aingona kuzvibata gym, good food chii chii you know.She had body iri pakati nepakati plus ainge akanaka. Ainge akaroorwa asi murume wacho ainge asingaone kuti mukadzi wake akanaka, he would actually ignore her. Aigara akapfeka tuma mini skirt apa ainge ari yellow bone, makumbo ake ainakidza kuona plus aitopfekera kuti vanhu vamuone.
Musi uyu tainge tine party pamba celebrating birthday party yamai vangu, we invited vanhu vakawanda and the party would start around 6 manheru. Ndakaita notice kuti eye contact yandaipihwa was more than just tete nemuzukuru. Party yainakidza and most of vanhu were now drunk and strong stuff yese yainge yapera. Tete asked me kuti ndiende navo kumba kwavo to get more strong stuff. Tachingopinda mumota ndakarovera padoor ndikadonhedza foni yangu next to zvidya zvavo and when I tried to get it ndakabata chidya chavo by mistake. To my surprise havana kupopota instead she just smiled ipapo mboro yangu ndakanzwa kuti yatomira muburugwa.Skirt yaTete Vanessa yakanga yasimuka nekugara kwavanga vakaita paseat.
Tete vakabva vati you can get fone yako yadonhera pakati pemakumbo angu, ndakamboita kakunyara asi she insisted I get it, pandada kuitora vakabva vavharira ruoko rwangu pakati pemakumbo avo kudziya kwacho made my heart to start racing fast. Takabva tatanga kukisana and the more we kissed ndaibva ndanakirwa even more. She rolled her seat and said, pedzisa zvawatanga or I will report this….ini ndikati ‘ndozvangu izvi munomama neni’. Pasina nguva ndakakaruka ndisina hembe ndinanzva minyatso yatete. Ivo vakabva vati nhasi ndanga ndakakutargeter iwewe mufanha. Ndirikuda kuti undisvire one round and we will never talk about it again. One round, this is your only chance. Give me your best!
Akomana pakasvirwa munhu ipapo, ndakasimudza kamini kavo kuisa muwaist mavo ndakuuya pamusoro pavo ndikaiti bvooo ndikaona tete yavhura muromo. Vainge vane beche riri tight kuratidza kuti hapana aivasvira.Vakomana ndakanakirwa.Ndakaibudisa just to tease her and vakabva vandidhonza back. Waingonzwa kuchemerera….mmmmmh muzukuru svira kani. Handisati ndambosvirwa zvakadai….mmmmmmmmh muzukuru kani….ooooooh ooooh My….ndakutunda vakadedzera tete vanakirwa zvekuti vakazoti we should do this every week. Ndakabva ndasiiwa ndisina kutunda nekuti takanzwa kunge there was someone aiwuya. She started the car tikabuda to go get the strong stuff asi patakadzoka most of the people vanga vakutoenda…. Ndakamirira next week pandirikuenda kuweekend kumba kwavo… Ndichakuudzai zvichaitika.
Kusvira kwandakaita Tete Vangu Mumota paParty